Dubartoonni Hindii tumaa dirqiidhaan tumatan maaliif didan? - BBC News Afaan Oromoo
Dubartoonni Hindii tumaa dirqiidhaan tumatan maaliif didan?
Madda suuraa, WaterAid/ Ronny Sen
Haadholin warraa gosa Baayigaa Waggoota 2, 000'f tumataa turan
Hindiittis ta'e addunyaa biraatti tumachuun fakkeenya bilisummaa fi qabsooti. Dargaggoonni hedduu eenyummaa isaanii fi wanta adda isaan godhu agarsiisuuf itti fayyadamu,
Anaaf garuu qabsoon tumachuu dhabuu dha.
Funyaanii fi gurra urachuun mallattoo dubartii itti hacuucan akka ta'e yaadaan guddadhe. Sababni isaas harmeen koo tumaa lama ykn sadii qabdi. Akkoon koo immoo ishee caalaa qabdi. Kanaan ala filmaata akka hin qabne natti himan.
Baadiyyaa bakka warrikoo dhufan, Kaaba Hindii bulchiinsa Piraadeshitti, dubartoota heerumanif tumachuun barbaachisaa dha. Maqaa isaa Godnaa jedhuun.
''Warri koo akka natti himanitti tumaa yoo hin qabaanne, namni na fuudhe na harkaa fuudhee hin nyaatu ykn hin dhugu. Namni na qollifata,'' jechuun harmeen koo dhiyeenya natti himte. Abbaan koo fi warri dhiiraa tumaa tokkoyyuu hin barbaadan,'' naan jette.
Yeroo heeruma ishii A.L.A bara 1940 umuriin ishii 11 ture. Cidha booda haati ollaa jiraattu waamamtee akka tumaa godhattu waamamte.
Tumaa: Godaannisa gurraacha
Dhalli namaa waggoota kumaatamaaf itti fayyadamaa ture
Namoota hidhaa bu'an, gargaartota akkasumas garboota adda baasuuf itti fayyadamu ture
Qaroomawwan durii kanneen akka Girikii, Roomaa akkasumas Hindii itti fayyadamu ture
Lammiileen Jewiish immoo kaampii itti turfamanitti tumaa lakkoofsaa qabu ture
Nama maqaa itti baasuufis ta'e sadarkaa hawaasa tokko adda baasuuf itti fayyadamu
Yeroo baay'ee akka adabbiitti, cunqursaa agarsiisuuf itti fayyadamu
Takka takka maqaa abbaa warraa tumachuun abbummaa agarsiisu
Meeshaan itti tuman kan duriiti: lilmoo ibidda keessa kaa'anii diimessu. Yeroo tuman qaama irra keessaa gubuun halluu gurraacha itti naqu.
Dur dur dhukkubbii isaa dandamachuufis ta'e madaa isaa fayyisuuf qorichi hin turre. Kanaaf, madaan suni qooruuf haga ji'a tokko turuu danda'a.
Waggoota torbaatama booda, tumaan harmeekooti badaa adeemuus dhukkubbiin yeroo ijoolluummaa tumatte garuu har'as ija ishee dura jira.
''Baay'een boo'e. Dubartii na tumtu miilaan dhiituu itti fufe. Dhumarratti akaakayyuu kootti akkan ishee rakkise na himatte.''
Fakkiiwwan xixiqqoo harka isheerra turan maal akka ta'an baruu hin dandeenye. Tarii fakkii abaaboo fi baala adda addaa ta'uu danda'aa jette yaadde.
Qorattuun yunivarsiitii Luknoow Keyaa Paandey waa'ee tumaa Hindii keessa adeemte kan qoratte yoo ta'u, fakkiiwwan tumatan keessaa biqiltuuwwanii fi bineensonni ni baay'atu.
Akkasumas maqaan abbaa warraa fi abbaa akkasumas maqaa qe'ee, bineensa waaqeffatan, fakkeenya aadaa fi gosaa tumachuu danda'u.
Yoo tumachuu baatte akka qollifatan harmee kootti himame ture
Tumaan ishee maal akka ta'e quba hin qabdu
Hawaasa muraasa keessumaa gosaan kan wal bulchan keessatti dubartoonnis ta'e dhiirri ni tumatu.
''Mallattoo eenyummaa, du'a boodallee fakkeenya lubbuu jedhamee amanama. Yeroo duutee lubbuun kee Waaqatti qajeeltu qaccee warra kee yeroo gaafatamtu tumaa kee irraa baruu dandeessa amantaan jedhu jira,'' jetti.
Hawaasa hedduu keessatti, akkuma qe'ee itti dhaladhe guddadhetti, tumaan bultii ijaarrachuu isaanii agarsiisuuf itti fayyadamu.
Haadha koo fi akkoo koof garuu mallattoo qulqullinaa jedhameeti amanama. Yoo dubartiin tumatte malee abbaa warraa ishii tajaajiluu hin dandeessu amantaa jedhuutu jira.
Barsiifata akkanaa garuu shamarran hedduu didaa waan jiranif xiqqaataa jira.
Ammayyuummaa fi misooma akkasumas addunyaa biraa waliin wal madaquun barsiifanni akkanaa baadiyyaa fi bakkeewwan gosaan wal bulchanitti akka jijjiiramu taasisaa jira.
Barsiifanni akkasumas ilaalchi akkanaa fooyya'aa kan jiruu fi shamarran qe'ee baadiyyaa keessa jiran fedhii tumachuu dhabaa jiru jedhu addee Paandey.
Harmeen Ayitaa, Badrii Bayii, intala isaanii caalaa bakka baay'ee tumatanis intalli diddee takka qofa tumatte
Waggoota 2, 000 darbanif dubartonnii addanaa tumaa tumataa turan.
''Akkuma dubartiin dhala godhachuu geesseetti addarra tumatti. Waggoota itti aananiif immoo qaama ishee hedduu irratti tumatti.
Anitaan umuriin ishii 15 yoo ta'u tumaa adda ishee irra jiru yeroo tumatte haalaan waan dhukkubeef, kan biraa dabalachuu hin feene. Faallaan garuu harmeen ishii qaama ishee bakka baay'ee irratti tumaa qabdi.
Harmeen Anitaa garuu intalli isaanii tumaa diduu isheetin hin lolani.
''Ani waan hin baranneef waan warri koo naan jedhan fudhe. Ishiin garuu baratteetti. Kanaafuu, yoo tumaa hin feene homaa miti,'' jedhan.
Waggoota booda kanaa ijoolleen dureessaa Hindii fiilmii Hooliwuud ilaaluu fi weellistoota Rook hordofuu irraan kan ka'e tumachuu haalaan fedhu. Hiriyyoonni koo hedduu illee tumataniiru.
Anaaf garuu, sababa aadaatin, tumaan safuudha - mallattoo cunqursaa.